Social Sciences Alternative Fuels
by Nyika Inotaura
Ko biofuels inogona kurapa kudivi kweAmerica kwemafuta here?
Kune zvakawanda zvakakosha zvezvakatipoteredza kubvisa mafuta nemiti-based biofuels se ethanol uye biodiesel. Kune imwechete, sezvo mafuta akadaro anobva muzvirimwa zvekurima, ivo vanowanzogadziriswa zvakare-uye varimi vedu vanowanzovabudisa ivo pamba, vachideredza kutendeseka kwedu kune dzimwe nyika dzisina kusimba dzemafuta. Uyezve, ethanol uye biodiesel inotora zvishoma kuderedza kusvibiswa kudarika mafuta anokonzerwa nepetroleum-based petroleum uye diesel fuel .
Havanawo mari yakawanda yemubhadharo wemagetsi ekupfumisa kune dambudziko rose rekuchinja kwemamiriro ekunze , sezvo ivo chete vanodzokera kumusana we carbon dioxide kuti zvitubu zvavo zvinowanzobuda kunze kwemhepo munzvimbo yekutanga.
Biofuels Inyoreka Kushandisa, asi Haisi Nguva Yakaoma Kuwana
Uye kusiyana nemamwe maitiro emagetsi anoshandiswa (semvura inonzi hydrogen, solar kana mhepo ), biofuels zviri nyore kuvanhu uye mabhizinesi kuchinja kusina zvinhu zvakagadziriswa kana kuchinja mumotokari kana mudzimba unopisa hupfumi-unogona kungozadza motokari yako iripo, rori kana imba oil tank with it. Avo vanotarisa kuti vatsiva petroli ne ethanol mumotokari yavo, zvisinei, vanofanira kuva ne "flex-fuel" yemuenzaniso inogona kushandiswa pane mafuta. Kana zvisina kudaro, injini dzakawanda dzinogara dziri dielini dzinogona kubata biodiesel sezvinongoita sewaini nguva dzose.
Pasinei nepamusoro pemakwikwi, zvisinei, nyanzvi dzinotaura kuti biofuels haisi kure nemishonga yekudhakwa kwedu kwepetroleum.
Rimwe boka revanhu rinoshanduka kubva kune petori kusvika kune zviyofuels, zvichipiwa nhamba yemotokari-motokari chete iri mumugwagwa uye kusina ethanol kana biodiesel pamapupo pane zvipo zvekuzadza zviripo, zvinotora nguva.
Pane Mashomanana Anokwana uye Michero Kutsigira Kuchinja kune Biofuels?
Chimwe chikonzero chikuru chekugadziriswa kwemafurosi yakawanda ndiyo dambudziko rekukura zvirimwa zvakakwana kuti zvigadzirise zvinodiwa, chimwe chinhu chinopesana chinotaura kuti chinogona kudikanwa kutenderera pamusoro pemasango ese enyika akasara uye nzvimbo dzakasununguka kune zvekurima.
"Kudzorera hupfumi chete kubva muzana yezvokudya zvemaderi uye rudzi rwebiodiesel zvingada kutengesa 60 kubva muzana yezvirimwa zvemazuva ano kune biodiesel production," anodaro Matthew Brown, nyanzvi yezvinyanzvi uye aimbova mutungamiriri wegadziriro emagetsi paNational Conference of State Legislatures. "Ndiyo mashoko akaipa kune vanofarira tofu." Chokwadi, soy ikozvino yakanyanya kuwedzerwa kukura sechinhu chemabhizimisi kupfuura sechinhu chokuratidza tofu!
Mukuwedzera, kukura kwakanyanya kwezvirimwa zvebiofuels kunoitwa nekubatsirwa kwehuwandu hwezvipembenene, marangi, uye maitiro emushonga.
Ko Kugadzira Biofuels Kunoshandisa Zvimwe Simba kune Zvingaita Here?
Rimwe rima rima rinowedzera pamusoro pebiofuels nderokuti kuibereka kunonyatsoda simba rinopfuura ravanogona kuita. Mushure mokunge vashandise mune simba raidiwa kukura zvirimwa nekubva vavachinjira kuva biofuels, muongorori weCornell University David Pimental anopedzisa kuti nhamba haingowedzera. Ongororo yake ya2005 yakawana kuti kubudisa ethanol kubva kuchibage kunoda 29 muzana simba rakawanda kudarika kuguma kwechigadzirwa chairo chakanokwanisa kuita. Akawana nhamba inoshungurudza yakafanana nenzira inoshandiswa kugadzira biodiesel kubva kune soya. "Hapana simba rinobatsira kushandisa michero yezvirimwa nemafuta emvura," anodaro Pimentel.
Nhamba idzi dzinogona kutarisa zvakasiyana-siyana, kunyange zvakadaro, nokuda kwenyika inoshandiswa kubva kune zvekurima zvinodhaka izvo zvingazoguma zvakasvibiswa. Biodiesel yakave yakagadzirwa kubva kune huku yekutakura tsvina, somuenzaniso. Pane imwe nguva mafuta emafuta anokwira kumusoro, iyo mavara emarara anopisa anogona kuunza mari inofadza uye inogona kuwedzerwa mberi.
Kuchengetedza inzira yakakosha yekuderedza kuzvidzora pamafuta ezviyo
Hapana munhu anokurumidza-kugadzirisa kuzvisunungura kubva kune fossil fuels uye munguva yemberi inogona kuona kuenzaniswa kwezvinhu-kubva kumhepo nemakungwa emvura kusvika kune hydrogen, yezuva uye, hongu, kumwe kushandiswa kwezvinhu zvinokwana biofuels - kusimbisa simba redu. Iyo "nzara iri muimba yekurara" iyo inowanzoregererwa kana ichifunga nezvekugadzirisa simba, zvakadaro, ichokwadi chakaoma icho chatinofanira kuderedza kushandiswa kwedu, kwete kungochidzorera pane chimwe chinhu.
Zvechokwadi, kuchengetedza ingangodaro ndiyo yakakura pane imwe " mafuta " mamwe anowanikwa kwatiri.
Yakarongedzwa naFrederic Beaudry.
Chii chinonzi Gasoline kune Engine Diesel
Kuita Biodiesel Kubva kune Algae
5 Motokari dzinotakura iwe Unogona Kuda Asi Hazvikwanisi Kutenga MuAmerica
Njodzi Dzakashata dzeFracking?
Kutevedzwa Kwemagetsi Okugadzirisa Kwemagetsi
Chii chinonzi SULEV?
Mubvunzo Wemotokari Wakawandisa: Ndeipi Mhosva Yangu Yemoto?
HCCI - Mhirizhonga Inokonzera Kufuridzira Ignition
Drop-in Mafuta Anowanikwa Munzira
Chii chinonzi PZEV?
Kunzwisisa Chinangwa cheBioethanol
Kushandiswa Kwekuvimba Kwakaitika muZvinyorwa Zvisinganzwisisiki
Zvikoro zveFrederick Law Olmsted - Iyo Yakapoteredzwa Musasa
Mars muChirungu: Kurondedzera Mitezo
Aya 9 Matauriro Okuzarura eSataniic Bible
Kuwa kweKhmer Empire - Chii Chakatadzisa Angkor's Collapse?
Nzira Yokudhura Manga Hands Netsoka dzeVatangi
Cal State East Bay - SAT Zvikoro, Mari nezvikwereti zveAdmissions Data
Aries, Leo, uye Sagittarius Ndeye Zodiac's Fire Signs
Namata Mwari Neshamwari
Kugadzikana kwe 'Traer'
Ndivanaani Ndiyo Haredhi?
Mitsara Inogadzirirwa Kudhura Vans Full Full Warped Tour
Kubva, Nhoroondo, nekudzivirira kweScot
Nhoroondo yeComputer Memory
Norwegian Glacier Museum neMuvakidzani Sverre Fehn
Mitemo yekutanga yeGorofu
Banana Wars: Major General Smedley Butler
Ko Shamba Rine Maziso Here?
Chii Chinoita Skateboarder Rodney Mullen Saka Zvakakura
Ndezvipi DSM RC Controllers uye Receivers uye Vanoitei?
Ndechipi Chiratidzo Chepfungwa Ndiyo Pokutaura Mako?